Fonosana manampy amin'ny fivarotana sy mahafeno ny fenitry ny tontolo iainana - Potato System Magazine
Tena Trend / Trend Паковочное оборудование
в Torohevitra momba ny manam-pahaizana manokana, Паковочное оборудование
Mikhail Afarinov, Lehiben'ny fitaovana famonosana, orinasa Agrotrade
Mila fonosana ve ny ovy? Raha mamaly an'ity fanontaniana ity amin'ny fomba fijerin'ny mpividy ianao, dia mazava ho azy eny: mety ny maka fonosana efa vonona avy amin'ny talantalana.
Ho an'ny mpamboly ovy sy legioma any ivelany, ny fampiasana fonosana antsinjarany dia fotoana iray ahafahana mivarotra ny vokariny amin'ny vidiny lafo kokoa. Marina indrindra izany raha ny ampahany lehibe amin'ny vokatra dia tsy mahatratra ny famaritana ny "ovy lehibe".
Karazana fonosana inona ho an'ny ovy sy legioma no malaza eny an-tsena ankehitriny? Ireo magazay dia aseho amin'ny ankapobeny ny safidy mahazatra: harato harato, harato harato, trano vita amin'ny fitambaran-polyethylene sy harato isan-karazany, kitapo ondana vita amin'ny polyethylene, sns.
Samy manana ny tombony avy ny tsirairay avy, nefa misy fatiantoka iray ihany koa - ny plastika mahazatra sy ny polyethylene dia tsy azo sokajiana ho fitaovana azo averina ampiasaina. Mandritra izany fotoana izany, ny governemanta Rosiana dia miomana am-pahavitrihana amin'ny tetezamita amin'ny dingana vaovao amin'ny fanavaozana ny "fako", mamolavola ny fiheverana ny andraikitry ny mpamokatra (EPR), izay mihevitra fa ireo mpamokatra amin'ny taona ho avy dia izy ireo ihany no hanary fonosana entana na karama ho an'ity fanangonana eco ity. Raha dinihina ity zava-misy ity, ary koa ny fanarahana ny fironana manerantany, maro ny rojom-barotra no manomboka mampiditra ny fenitra manokana momba ny fonosana ho an'ny tontolo iainana.
Manoloana an'io toe-javatra io dia tsy sarotra ny mieritreritra fa ny laharam-pahamehan'ny mpanjifa fonosana dia hiova tsy ho ela, ary ny safidy mora indrindra amin'ny tontolo iainana avy amin'ny efa misy - kitapo taratasy - dia ho tonga mialoha.
Tokony holazaina fa ny harona taratasy maoderina, ankoatry ny azo ahodina, dia manana tombony maro hafa. Manokana indrindra dia manana toetra mampiavaka azy tsara io: amin'ny karazana vokatra vita amin'ny taratasy dia misy vokatra mahazaka lanja hatramin'ny 20 kg. Ny kitapo ho an'ny vokatra legioma dia vita amin'ny sosona taratasy maromaro misy elastika manokana sy fanoherana ny ranomaso avo, noho izany dia azonao antoka fa tsy ho rovitra ny fonosana amin'ny fotoana atolotra azy avy eo amin'ny talantalana mankany amin'ny tranon'ny mpanjifa.
Ny kitapo taratasy dia manampy amin'ny fanitarana ny andian'ny ovy sy legioma: miaro azo antoka ny vokatra amin'ny hazavana ary manome rivotra.
Amin'ny alàlan'ny fikandrana tapaka, ny mpanjifa dia afaka manombatombana ny kalitaon'ny vokatra natolotra.
Ankoatr'izay, ny fonosana dia manome ny fotoana mety indrindra amin'ny fanaovana doka: eo ambonin'ny taratasy dia azonao atao ny mampihatra lahatsoratra milaza ny karazana ovy sy ny toerana namokarana azy, ary ny famolavolana loko tsy manara-penitra dia ahafahanao manasongadina ny toerana eo amin'ny talantalana.
Ireo mpanamboatra eoropeanina fitaovana famonosana entana dia manolotra fitaovana marobe izay mandeha ho azy ny fizotry ny famenoana vokatra ao anaty harona taratasy.
Anisan'ireo maodely mahazatra indrindra ny Upmatic 4110 (Upmann, Alemana) - fonosana mandeha ho azy feno ho an'ny fonosana vokatra ao anaty harona taratasy misy na tsy misy tahony manomboka amin'ny 1 ka hatramin'ny 10 kg. Izy io dia milina tsotra azo antoka, voasedra ara-potoana amin'ny famolavolana sy fifehezana.
Ny fitsipiky ny fiasan'izy ireo dia toy izao: kitapo taratasy dia avy amin'ny kasety / fonosana ary mandalo eo ambanin'ny hopper famenoana, sokafana miaraka amina modely pneumatika, aorian'izay dia feno ny vokatra. Amin'izao fotoana izao dia mihozongozona ny kitapo mba hozaraina bebe kokoa amin'ny vokatra. Rehefa vita ny famenoana dia mihidy ny kitapo, nozairina ary nafindra tany amin'ny fivoahan'ny packer.
Ny fikirana rehetra ho an'ny haben'ny fonosana isan-karazany dia tanterahina nefa tsy mampiasa fitaovana fanampiny.
Azo atao ny manambatra na ny mpikapoka milanja mandeha ho azy.
Ny tsipika vokarin'ny mpanamboatra dia misy koa ny maodely Upmatic 4115, izay manome ny fahaizana miasa miaraka amin'ireo fonosana hatramin'ny 15 kg.
Miankina amin'ny andian-tantara, ny milina famonosana dia misy milina fanjairana isan-karazany (ao anatin'izany ny lohan'ny fanjairana Fishbein fanta-daza), mpampita fehikibo manangona ary paompy banga.
- fonosana hatramin'ny 1,5 kg - manodidina ny 30 tsingerina / min.
- fonosana hatramin'ny 2,5 kg - manodidina ny 20 tsingerina / min.
- fonosana hatramin'ny 10 kg - manodidina ny 15 tsingerina / min.
• Haben'ny fonosana:
- hatramin'ny 10 kg: min. 160x80x300 mm; Max. 300x180x600 mm
- hatramin'ny 15 kg: max. 400x180x700 mm
• Volan'ny kasety: 300 gony / gony eo ho eo
• Volavola naoty: 220/400 volts, 50 Hz
• Fanjifana herinaratra: 3,0 kW
• Faneren'ny rivotra: 6 bar
• Fanjifana rivotra: 13,8 l / tsingerina
• Milanja: 700 kg
Fitaovana tsy voatery:
• mpanonta marika miaraka amin'ny dispenser sy fitaovana fanaovana programa, pirinty mafana;
• rafitra fanaraha-maso kofehy;
• fanitsiana herinaratra ny haavon'ny conveyor;
• fanitsiana herinaratra amin'ny hopper famahanana kitapo.
Ny tahan'ny famokarana avo kokoa dia azo trandrahana amin'ny alàlan'ny modely Upmatic 4210 (manangona kitapo roa hatramin'ny 10 kg amin'ny fotoana iray).
Any Russia, mbola vitsy ny ohatra fampidirana fitaovana toy izany, na dia mitombo tsy mitsaha-mitombo aza ny fahalianana amin'izany. Amin'izao fotoana izao dia misy ny tetikasa izay eo amin'ny dingana fampiharana. Mampalahelo fa mitaky fotoana be dia be io fizotran-javatra io, satria ny fangatahana any Eropa ho an'ny mpanangona fonosana famenoana harona taratasy dia avo be. Noho ny "filaharana" dia manodidina ny 26 herinandro ny fe-potoana fampiharana eo ho eo (manomboka amin'ny fangatahan'ny mpividy ka hatramin'ny komisiona feno) eto amintsika. Saingy ny faran'ny fotoana toy izany dia ahafahanao mitondra ny tetik'asa ho tonga lafatra. Manokana indrindra izahay dia nandefa fonosana vita Rosiana izay nofidian'ny mpanjifa amin'ny famonosana ovy ho fankatoavan'ny mpanamboatra fitaovana any Alemana hanazava ny fomba hamenoan'ny fonosana ny takiana amin'ny habe sy ny hakitroky ny fitaovana.
Misimisy kokoa momba ny fitaovana:
Tags: fonosana mahafinaritra eco
Azbuka Vkusa dia nanadihady fironana ara-tsakafo ho an'ny 2021
Yekaterina Lomakova, filoha lefitra misahana ny hetsika ara-barotra any Azbuka Vkusa, dia nanasongadina ireo mety ho fiovan'ny mpanjifa amin'ny taona 2021 ho avy. Fanandramana bebe kokoa ...
Hanolotra fandraràna ny fivarotana legioma amin'ny fonosana plastika i Frantsa
Nanomboka tamin'ny 1 Janoary 2022, ny fandrarana ny fivarotana voankazo sy legioma anaty fonosana plastika na amin'ny plastika ...
Fonosom-bary mifangaro amin'ny legioma sy ovy: baoritra sy kitay
Marais Group, mpamokatra frantsay sy mpamatsy legioma vaovao, dia nanolotra fonosana fonosana vaovao ho an'ny vokatra ao aminy: baoritra ...
Ukraine amin'ny 2020 dia hampitombo ny faritra eo ambanin'ny tsipìka 30%
Sambo kaontenera Ever nomena averina, fa ny lakandranon'i Suez mbola mikatona ho an'ny fifamoivoizana